I-InboxAware: Ukubekwa Kwebhokisi Lemilayezo Engenayo le-imeyili, Ukuqashwa Kokulethwa Nedumela | Martech Zone
ULwesithathu, May 26, 2021 ULwesithathu, May 26, 2021 Douglas Karr
Ukuletha i-imeyili ebhokisini lokungenayo kuyaqhubeka nokuba yinqubo ekhungathekisayo kumabhizinisi asemthethweni njengoba abagaxekile beqhubeka nokuhlukumeza nokulimaza imboni. Ngoba kulula futhi kungabizi kakhulu ukuthumela i-imeyili, abogaxekile bangavele bagxume besuka kwinsizakalo baye kwisevisi, noma babhale umbhalo wabo owuthumela kusuka kuseva kuye kuseva. Abahlinzeka ngemisebenzi ye-inthanethi (I-ISP) baphoqeleke ukugunyaza abathumeli, bakhe udumo ekuthumeleni amakheli e-IP nezizinda, kanye nokwenza amasheke ezingeni ngalinye le-imeyili ukuzama ukubamba abenzi bokubi.
Ngeshwa, ngokuqapha okukhulu, amabhizinisi ajwayele ukuzithola elenga kuma-algorithms futhi ama-imeyili awo ahanjiswa ngqo kusihlungi se-junk. Lapho idluliselwa kufolda engenamsoco, i-imeyili yathunyelwa ngobuchwepheshe futhi; ngenxa yalokhu, izinkampani azinaki iqiniso lokuthi ababhalisile bazo abawutholanga umyalezo wabo. Ngenkathi ukulethwa kusetshenziselwa ukuthi kubhekiswe ngqo kwikhwalithi yomhlinzeki wakho wesevisi ye-imeyili, ukuhanjiswa manje sekuncike kuphela kuma-algorithms.
Akunandaba noma ngabe uyakhe insizakalo yakho, ikheli le-IP elabiwe, noma ikheli le-IP elizinikele… kubalulekile ukuqapha ukubekwa kwakho kwebhokisi lokungenayo. Futhi, uma kungenzeka uthuthela kumhlinzeki wesevisi omusha futhi ukufudumeza ikheli le-IP, ukuqapha kuyinkqubo ebucayi yokuqinisekisa ukuthi imilayezo yakho iyabonwa ababhalisile bakho.
Ukuze uqaphe kahle ukuthi ngabe i-imeyili yabo ikwazile yini ukungena ebhokisini lokungenayo kunefolda engenamsoco, kufanele usebenzise izinhlu zembewu yababhalisile kuwo wonke ama-ISP. Lokhu kwenza abathengisi be-imeyili bakwazi qapha ukubekwa kwebhokisi lokungenayo bese uxazulula izinkinga ezingeni lokufakazela ubuqiniso, ileveli yedumela, noma ileveli ye-imeyili ukukhomba ukuthi kungani ama-imeyili awo angahanjiswa kumafolda angafuneki.
Ipulatifomu yokulethwa kokungenayo kwe-InboxAware
I-InboxAware inazo zonke izici ezibalulekile ezidingekayo ukuqapha ukubekwa kwebhokisi lakho lokungenayo le-imeyili, idumela, kanye nokulethwa ngokuphelele:
Ukuqapha Ukuqokwa Kwe-imeyili - Thola ukuthula kwengqondo ngezixwayiso ezizenzakalelayo nokuqapha kombundu. Setha imikhawulo yakho yokwamukela futhi masikwazise uma okuthile kubukeka kungalungile.
Ukuhlolwa Kohlu Lwembewu - elandelwa ngemuva kwemikhuba emihle esetshenziswa ngochwepheshe be-imeyili, ukuqapha ukufakwa kwebhokisi lokungenayo le-InboxAware kwenza abathengisi be-imeyili bakwazi ukubona nokunqoba izihlungi zokuqinisekisa kanye nezicupho zogaxekile ezingamisa ama-imeyili akho ngaphambi kokushaya ukuthumela.
Ukubika Ngokulethwa - I-InboxAware inikeza abasebenzisi ngombono osobala futhi omncane wayo yonke idatha yabo ye-imeyili, engahlungwa futhi ihlulwe ngaphandle kokuthekeliswa kumbiko wokufunda kuphela.
I-InboxAware ikuvumela ukuthi wenze ngezifiso ideshibhodi yakho ngokukhetha kusuka kumawijethi amaningi wokubika futhi uwahlele ngokusebenza okulula kokudonsa nokudonsa. Ukuhlelwa kwabo okubanzi kwamawijethi asebenzisanayo kuqapha ukusebenza kwakho kwe-imeyili kuzinkomba eziningi.
Bhuka i-InboxAware Demo
Ukudalula: Sisebenzisa izixhumanisi zethu ezihambisanayo kule ndatshana.
Tags: ukuhanjiswaipulatifomu yokulethwaukukhishwa kwe-imeyiliidumela le-imeyiliukuphathwa kwegama le-imeyiliukuqapha idumela le-imeyiliukuqapha ibhokisi lokungenayoinboxwareuhlu lwembewu